Serbia: Misafidy, na i Tadic na i Nikolic · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Desambra 2018 14:33 GMT
Manohy ny fampielezankeviny mialoha ny fifanandrinany amin'ny fihodinana faharoa hotanterahina ny 3 Febroary i Tomislav Nikolic, mpifaninana ho filoham-pirenena avy ao amin'ny Antoko Radikaly Serba (SRS) sady lefitr'i Vojislav Seselj, voatana any amin'ny Fitsaran'i La Haye, sy i Boris Tadic, Filoha Serba amin'izao fotoana sady mpitarika ny Antoko Demokratika (DS).
Nilaza tao amin'ny Gazety mpivoaka isan'andro ao Belgrade, Danas, i Mladjan Dinkic, minisitry ny toekarena ao Serbia (22 Janoary):
Ho fitsapankevibahoaka momba ny Firaisambe Eoropeana ireo fifidianana ireo. Vato ho an'i Eoropa ny vato halatsaka ho an'i Tadic, raha vato ho an'ny tsy fandriampahalemana sy ny fitomboana miadana kosa ny vato ho an'i Nikolic.
Ndreto misy lahatsoratra roa monja avy amin'ireo lahatsoratra marobe maneho ity fomba fijery ity.
Matahotra ny fiverenan'ny politika nasionalista ao Serbia nisy tamin'ireo taona 90 i Jasmina Tesanovic. Nanoratra izy ny 29 Janoary:
Hifidy an'i Boris Tadic aho amin'ny fihodinana faharoa. Manana tahotra goavana an'ilay [raharaha Aventino (rohy maty)] aho. Tamin'izany, namela ny parlemanta Italiana ny mpanohitra rehetra avy ao amin'ny demokratika ary nankany Aventino – ilay havoana akaikin'i Roma. Io no fanoherana ireo vondron'ny mpitandro filaminana fasista, izay namono ilay nasionalista [Matteotti], anivon'ireo hafa, tamin'ny 1924. Nanohitra ampahibemaso ny halatra tamin'ny fifidianana tamin'ny taona nialoha io ihany koa izy. Nampiasa ity toedraharaha ity hakàny ny fahefana i [Mussolini]. Hainareo ny zava-nitranga taorian'izay […]
Mieritreritra i Nebojsa Milenkovic raha hanohana an'i Tadic na tsia. Nanoratra tao amin'ny bilaoginy B92 izy ny 23 Janoary:
Tena tsy ny radikaly no olana goavana anatin'ny fiarahamonina Serba, tsy ireo mpifidy sy mpomba ireo politika diso sy tia mijaly izay asehon'ny Antoko Radikaly Serba ihany koa. Raha nampisy olana be tahaka izao ity vondrona ity, dia tsy nahitàna mangirana izao toedraharaha izao satria araka ny hitantsika, tsy hanjavona amin'ny fiainana ara-politika ao Serbia ireo olona ireo. Noho izany, fampielezankevitra diso izany – raha tsy maharesy isika, haharesy ny radikaly. Fara-fahakeliny, telo no anton'izany:
1. Momba ny andraikitra ara-politika ny demokrasia. Izany no antony mahatonga an'i Boris Tadic tsy maintsy manome tatitra momba ny asany taloha, hanekeny ny hadisoany sy hanomezany fomba fijery ara-politika raha tiany hifidy azy isika. Ny misy anefa dia manana fampimiràna ahitàna singa roa tsy fantatra isika. Na izany aza, raha manan-tsafidy haka ny iray tsara kokoa amin'ireo mpifaninana roa ratsy ireo ny mpifidy, maro amin-dry zareo no tsy handeha any amin'ny biraom-pifidianana mihitsy.
2. Tsy tian'ny mpifidy toy ny tsara lavitra ny ‘tsy dia ratsy loatra’.
3. Mampihetsika sy mampitambatra tokoa ireo mpifidy ny SRS ny fampielezankevitra momba ireo ratsy roa ireo ary zavatra tsy tiana hiseho izany.
Mitombina ny fanontaniana amin'ny antony anararaotana ity fampielezankevitra ity raha mampihetsika ny Serba radikaly sy manakivy ny Serba demokratika izy io […].
Afrika Mainty 05 Avrily 2017